RASMI: Samuel Eto’o oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta – Gool FM
RASMI: Samuel Eto’o oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta
(Yurub) 07 Sebt 2019. Weeraryahan Samuel Eto’o ayaa ku dhawaaqay inuu isaga fariistay gabi ahaanba ciyaarista kubadda cagta.
Xiddiga afarta jeer ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka Afrika ayaa warbixinta uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka ku xaqiijiyey inuu soo gabagabeeyey xirfaddiisa ciyaarista kubadda cagta kaddib 22-sanadood oo cajiib ah oo uu ku dhex jiray.
Waxa uu ku biiray Real Madrid, isagoo sidoo kale amaah ugu ciyaaray Leganes, Espanyol iyo Mallorca.
Waxa uu ku dhammaystiray 70 gool oo uu u dhaliyey 165 kulan oo uu u saftay kooxda La Ligaha ka dhisan.
Eto’o ayaa kooxda Barcelona ugu biiray adduun dhan 24 milyan euro.
Shan xilli ciyaareed oo uu ku sugnaa garoonka Camp Nou waxa uu dhaliyey 130 gool 199 kulan oo uu saftay , waxaana uu gacanta ku dhigay saddex horyaalka La Liga, hal Copa del Rey, labo Supercopa de Espana iyo labo Champions Leagues.
Sanadkii 2009-kii waxa uu macallin Jose Mourinho kula biiray kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga.
Labo xilli ciyaareed oo uu ku sugnaa laacibkan garonka San Siro ayuu ku dhaliyey 53 gool 102 kulan oo uu ku dheelay, isagoo ku qaaaday horyaalka Serie A, labo Coppa Italia, hal Supercoppa Italian, hal Champions League oo kale iyo koobka kooxaha Adduunka.
Waxa uu sidoo kale Eto’o ka soo ciyaaray kooxda Ruushka ka dhisan ee Anzhi Makhachkala, kooxaha ka dhisan dalka England ee Chelsea iyo Everton, naadiga Talyaaniga ka dhisan ee Sampdoria, kuwa turkiga ee Antalyaspor iyo Konyaspor & ugu dambeyn dalka Qatar isagoo u dheelay kooxda Qatar SC.
Eto’o ayaa soo gabagabeeyey xirfaddiisa ciyaareed kaddib 370 gool oo uu dhaliyey 759 kulan oo uu ka ciyaaray lix waddan oo kala duwan.
Kooxda Chelsea oo heshiis kordhin u soo bandhigaysa mid ka mid ah xiddigaheeda daafaca